फूटबल – Nepali International Categories – Khel Dainik - Page 338
जब जुलियाले मेसी र रोनाल्डो भेटिन् …
ओस्कार विजेता नायिका जुलिया रोबर्टसले विश्व चर्चित फुटबल खेलाडी लिओनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई भेटेकी छिन्।
इपीएल: चेल्सीलाई सात अंकको अग्रता
वैशाख १३ – लिग लिडर चेल्सीले सात अंकको अग्रता कायम गरेको छ । इपीएल लिग अन्तर्गत घरेलु मैदानमा भएको खेलमा चेल्सीले साउथह्याम्प्टनलाई ४–२ ले हराएको हो ।
न्यु क्यासल प्रिमियर लिगमा फर्कियो
वैशाख १२ – न्युक्यासल युनाइटेड प्रिमियर लिग फुटबलमा बढुवा भएको छ । च्याम्पियनसिप अन्तर्गत प्रिस्टन नर्थ इन्डलाई ४–१ ले हराउँदै न्युक्यासल प्रिमियर लिगमा फर्किएको हो । न्युक्यासल लिगका दुई खेल बाँकी हुँदै प्रिमियर लिगमा बढुवा भएको हो ।
मेसी उत्कृष्ट खेलाडी भएको ला लिगा अध्यक्षले पहिलो पल्ट स्विकारे, जिदानले गरे मेस्सीको प्रशंसा
१२ बैशाख / बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लिओनल मेसी विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट खेलाडी भएको स्पेनको चर्चित लिग फुटबल ‘ला लिगा’का अध्यक्ष जाभियर टेबासले पहिलो पल्ट स्विकार गरेका छन् । ला लिगा अध्यक्ष टेबासको स्विकार्यताले निकै ठूलो महत्व राखेको छ। म्याड्रिडलाई उसैको मैदानमा ३–२ गोलले पराजित गर्न मेसीले गरेको दुई गोलको अहिले विश्वव्यापी चर्चा भइरहेको छ। टेबास पनि यो खेल […]
बार्सिलोनाद्वारा रियल म्याड्रिड पराजित
बार्सिलोनाले १० खेलाडीमा सिमित रियल म्याड्रिडलाई उसैको घरेलु मैदानमा ३–२ले स्तब्ध बनाएको छ ।
एफए कप: विवादास्पद खेलमा आर्सनल फाइनलमा, म्यानचेष्टर सिटी पराजित
वैशाख ११– म्यानचेष्टर सिटीलाई पराजित गर्दै आर्सनल एफए कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एक गोलले पछि परेको स्थिती उल्टाउँदै आर्सनलले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै सिटीलाई २-१ ले पराजित गरेको हो। आर्सनलले अब उपाधिका लागि आगामी मे २७ मा चेल्सीसँग खेल्नेछ।
रियल म्याड्रिडविरुद्ध नेइमारले खेल्न नपाउने, प्रशिक्षणमा भने समावेश
बैशाख १० / नेइमारलाई रियल म्याड्रिडविरुद्ध टिममा समावेश गराउने विषयमा २ दिनदेखि चलिरहेको अन्यौलता समाप्त भएको छ।
चेल्सी एफए कपको फाइनलमा, टोटनहृयाम ४-२ गोलले पराजित
१० बैशाख / टोटनहृयामलाई पराजित गर्दै चेल्सी एफए कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । चेल्सीले टोटनहृयामलाई ४-२ गोल अन्तरले हराएको हो । यसअघि चेल्सीले दुई पटक अग्रता दिएर पनि जोगाउन सकेको थिएन । घरेलु मैदान स्टामफोर्ड बि्रजमा भएको खेलमा चेल्सीले पाँचौ मिनेटमा नै विलियनको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । तर, १८ औं मिनेटमा हृयारी केनले गोल गरे […]
आजको एल क्लासिको कस्ले जित्छ? मड्रिड कि बर्सिलोनाले ?
आज रियाल मड्रिड र बर्सिलोना भिड्दै छन।
नेइमार एक सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचिमा, मेस्सी र रोनाल्डो छैनन्
बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर नेइमार टाइम म्यागजिनको विश्वका एक सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचिमा परेका छन् । यो सूचिमा क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सी भने परेका छैनन् । सूचिमा पर्ने फुटबल खेलाडीमा नेइमार र टम ब्राडी मात्रै छन् । विश्वका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिका प्रभावलाई मापन गर्ने सूचिमा नेइमारले आफूलाई पारेका हुन् ।
गुरुले बनाइ दिए चेलाको घर बैशाख १०, २०७४
तामाङको नेतृत्वमा फुलकन्ट्याक्ट संघ गठन बैशाख १०, २०७४
कोरोना विरुद्ध लड्न सरकारलाई सहयोग गर्न एन्फा तयार बैशाख १०, २०७४
राखेप कै तत्परतामा पोखरामा बन्ने भो अर्को वैकल्पिक रंगशाला बैशाख १०, २०७४
फुटबल संघको साधारणसभा र गोल्डकप स्थगित बैशाख १०, २०७४
भैरवलाई लियो बिक्रम स्मृति कपको उपाधि बैशाख १०, २०७४